တက္ကသိုလ်မှ သရော်စာဇတ်လမ်းများ တက္ကသိုလ်&
Author Topic: တက္ကသိုလ်မှ သရော်စာဇတ်လမ်းများ တက္ကသိုလ်& (Read 11060 times)
Re: တက္ကသိုလ်မှ သရော်စာဇတ်လမ်းများ တက္ကသိုလ)
« Reply #10 on: October 31, 2011, 04:42:25 PM »
ဦး ဦး ရဲ ကြီး နော်...
သား သား လဲ ပါ ချင် တယ်၊
သား သား မပါ ရ ရင်....... အ တန် (မှား လို့) အတန်း မတက် ပဲ...
မိန်း ခလေး အိမ် သာ နား မှာ သွား ထိုင် နေ မှာ ဂျ
« Reply #11 on: October 31, 2011, 06:25:25 PM »
အဲ နာပါတယ်ဟ ရဲရဲ ဇတ်လမ်းမှာ ရဲရဲကို ချစ်တွားဘီ
« Reply #12 on: October 31, 2011, 07:08:58 PM »
သရော်စာ ဆိုလို.ဆိုင်မဆိုင်တော. မသိဘူး။။။။
www.burmastrangenews.com ဆိုတဲ.ဆိုက်ကိုတော. အတော်လေး သဘောကျတယ်ဗျို.။။။ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်...။။။
If YoU BoRn PoOr.
It Is NoT yOuR mIsTaKe.
BuT, iF yOu DiE pOor.
« Reply #13 on: November 01, 2011, 12:10:12 PM »
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း နဲ. ဒီဇာတ်လမ်းသိသလိုမှတ်တာ ဘယ်နှယ်. Expandables ကြီးကိုး....။။။
« Reply #14 on: November 04, 2011, 03:29:19 PM »
ကားပေါ်တွင်တစ်လျှောက်လုံး ကိုထွန်းအေးနဲ့ ဂိဂိတို့ငန်းကြောထလာကြလေပေ၏.မမ၏စနေ၂ခိုင်ကို ကသိုင်းရှ့ရှ့ရင်း မြို့ပြင်ဖက်သို့ ရောက်မှန်းမသိရောက်လာလေပေသည်
‘ဂိဂိ ငါဒီနေရာကနေ့လမ်းလျှောက်သွားတော့မယ် မမပြောတာ ငါ့တို့သွားချင်တဲ့နေရာရောက်ဖို့ နီးနေပီတဲ့ ဒီတော့ တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ငါကူလို့ရအောင် ငါဖြတ်လမ်းရှာပြီးလိုက်ခဲ့မယ် မင်းမမနဲ့လိုက်သွား ဟုတ်ပီလား ဂိဂိ”
ဂိဂိမှလည်း အလှပဂေးမမနဲ့ တူတူသွားရတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် တစ်ချက်မှမငြင်းပဲ ဟုတ်ဟုတ် နဲ့ပုတ်သင်ညို ခေါင်းညိတ်သလိုညိတ်ရှာလေသည်.။
လမ်းတစ်လျှောက်ကားပေါ်တွင်တော့ ဂိဂိတစ်ယောက် မမအားစတင်ကြူပါတော့သည် “သူဘယ်လောက်ချောကြောင်း အသားဘယ်လောက်ဖြူကြောင်း သတ္တိဘယ်လောက်ရှီကြောင့် သိုင်းမှန်သမျှ ပုဆိုးဂွင်းသိုင်းပါမချန်အကုန်တတ်ကြောင်း အရက်မသောက်တတ်ကြောင်း(၀ီကစီပဲသောက်တာလေ) ဆေးလိပ်မသောက်တတ်ကြောင်း(စီးကရက်ပဲသောက်တာနေမှာ) မိန်းမကိစ္စအရမ်းကင်းကြောင်း မဆိုလျှင် မီးချစ် ဓါးမ မီးဖို တောင်ပင်မသုံးဖူးကြောင်း ပက်ပက်စက်စက် အာမနပါ ကြူပါတော့လေသည်။
မမလည်း ဂိဂိ၏ကြူချက်များကို နားများအူလောက်အောင်နားထောင်ပြီးနောက် ကားကိုတစ်နေရာတွင် ထိုးရပ်လိုက်လေတော့၏
‘ကဲဂိဂိ အဲ့ဒါ ဂိဂိတို့သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့နေတရာပဲ ဟိုမှာတောင်ကြီးတစ်ခုတွေ့လား အဲ့ဒါကို တောင်ကြီးလို့ခေါ်တယ် မှတ်ထားနော်’
‘ဟောဟိုဟာက ကိုကင်းစိုက်ခင်းတွေပဲ အမေရိကန်တွေနဲ့ ဒီနိုင်ငံက စစ်တပ်ပေါင်းပီး မြို့ခံတွေကို အဓမ စေခိုင်းကာ စိုက်ခိုင်းထားတာ’
ဂိဂိလည်းပါလာသော နီကွန်ကန်နန်အစုံပလုံ camera နဲ့ မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်လေတော့သည်။
ဖြပ်ဖြပ် ဖြပ်ဖြပ်ဖြပ်ဖြပ် ချက်ချက် ချွတ်ချွတ် .နဲ့ကင်မလာရိုက်သံများဆူညံစွာထွက်ပေါလာလေတော့သည်…
‘ဟေ့ရပ်စမ်းမင်းတို့ဘာတွေလုပ်နေကြတာလည်းအခုချက်ချင်းရပ် ဒါသတ်မှတ်နယ်မြေကွ ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်မရှိဘူး ရပ်ကြည့်ခွင့်မရှိဘူး သေးပေါက်ခွင့်မရှီဘူး အတွဲချိန်ခွင့်မရှီဘူး’ ဟူသောကြယ်လောင်သော အသံနဲ့အတူ စစ်ကားတစ်ကားထိုးဆိုက်လာကာ စစ်ကားပေါ်မှရုပ်ဆိုးဆိုး အသက်ကြီးကြီးလူတစ်ယောက်ခုန်ဆင်းလို့လာ၏
‘မင်းတို့တွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်လား ရုပ်ကြည့်တာနဲ့သိတယ်နော်’ ဟူထိုလူကြီးကပင်ဆက်လက်၍ပြောလေ၏/
‘မဟုတ်ဘူး ဂျပန်ကား..မဟုတ်ဘူး.. ဒါက မမရဲ့အသိတွေပါ သူတို့ကဒီမှာ တရိစ္ဆာန်တွေလာလေ့လာတာပါ သုတေသနလာလုပ်ကြတာပါ’
‘ငါ့ကိုလာမညာနဲ့မမ မင်းငါ့ကိုအမြဲညာနေတာငါသိတယ်နော် ဘယ်မှာလည်းတရိစ္ဆာန်လေ့လာတယ်ဆို ဘယ်မှာလည်း တရိစ္ဆာန်…ကြာတယ်ကွာ ဟေ့ရောင်တွေသူတို့နှစ်ယောက်လုံး ကြိုးတုပ်ပီးကားပေါတင်ဟေ့ ကောင်မလေးကို ရှေ့ခန်းမှာထားလိုက် ဟိုကောင်ကိုတော့မင်းတို့အနောက်မှာလုပ်ချင်ရာလုပ်တော့ဟေ့.’
ဂိဂိလည်းအခြေအနေမကောင်းတော့သောကြောင့်ဖွက်ထားသော၂လုံးပူး သေနတ်ကိုထုတ်ကာ ပြစ်ပြစ်နဲ့ ပြစ်လိုက်တော့သည် အားလုံး စေးကပ်ကုန်ကာ ရွံရှာပီး အတုံးအရုံး သေကုန်ကျလေသည် ပြီးမှ ရှောင်နေလိုက်သော ဂျပန်ကားထွက်လာကာ ဂိဂိကာ သေနတ်နဲ့ချိန်ထားလိုက်လေတော့သည်
‘ဟားဟားဂိဂိမင်းသေနတ်ကနှစ်ခါမပြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ ဟဟ ဒီတစ်လှည့်မင်းသေပီသာမှတ်ပေတော့.’.ဟုပြာရင်းသေနတ်မောင်းကို ဖြုတ်မယ်အလုပ်
ဖောက်စွပ်ကား သေပါပြီဟ ဟူသောအသံနဲ့အတူ ဂျပန်ကားတစ်ယောက် အုတက်ကာ ဂစ်ဂစ်ဂစ်ဂစ်နဲ့သေသွားပါတော့သည်။
‘တွေ့လားဂိဂိငါ့ဓါးဘယ်လောက်မြန်တယ်ဆိုတာ တွေ့ပီမဟုတ်လား မင်းတို့သေနတ်တွေသိုင်းတွေက မစွံပါဘူးကွာ…’
‘၀ူးဝူးဒိန်းဒိန်း ဂလုံးဂလုံး’’ဟူသော ဆူညံသံတွေနဲ့အတူ ဖုံလုံးတွေအလိပ်လိုက်တက်ကာ တက်ကာနဲ့ စစ်ကားတွေ လာနေကြပေလေသည်…
“ဂိဂိနဲ့ ကိုထွန်းအေး ပြေးမယ် ဒီတစ်ခေါက်လာတာအများကြီး ဒီကောင်တွေသတင်းရသွားတာနေမယ်……..လာလာကားပေါတက် မြန်မြန်”
၀ူးဝူး ၀ုန်းဝုန်း အသံများနဲ့အတူ မမကားလေး လျှင်မြန်စွာပြေးထွက်သွားလေ၏
မမကပြေးရင်လူဆိုးများကလိုက်ရင် မမရဲ့ကားမောင်းကြွမ်းကြင်မှုကြောင့်မြို့ထဲသို့ပြန်ရောက်လာသည် သို့သောလည်း အနောက်ကလိုက်နေသောလူဆိုးများက ထပ်ချပ်မကွာလိုက်လျှက်ရှီနေတုန်းပင်
ကနဦးအစက၀င်လာသော immigration ဂိတ်သို့အောင်မြင်စွာပုန်းရှိုးကွယ်ရှီုးရောက်လာလေသည်………..
ဂိတ်တွင် ပြင်းရိစွာအိပ်ငိုက်နေသောအစောင့်နတ်ဦး လှုပ်လှုပ်ရှားရျားနဲ့ ထပစ်လေသည် သို့သော် အင်မတန်မှလက်ဖြောင့်သော ကိုထ၊ွန်းအေးဓါးချက်မိသွားလေသည် ပြီးနောက် တဖန် immigration officer အား ဘူးတားကြီး ငပေါကြီးဆဲကာ ဂိဂိ မှာ ဟိုဟာလှန်ပြ သိုင်းနဲ့ချလိုက်ရာတစ်ခါတည်းရှောဘရားသားပြသွားပေတော့၏
ကားကြီးသုံးစင်းနဲ့ရောက်ချလာသောစစ်သားများအား ကိုယ်ထွန်းအေးမှခုခံပြစ်ပြီး လက်ပြစ်ဗုံး ၃လုံးအား ပြစ်ကာ ဂိဂိရှီလာလေယာဉ်သို့ အလွန်လျှင်မြန်သော နှုန်းဖြင့်ပြေးလာလေတော့သည်….
နောက်တွင် စစ်သားများက ညာသံပေးကာ လိုက်ပြစ်ကြသော်လည်း ကိုထွန်းအေးအားမထိချေလေယာဉ်ကိုယ်ထည်ကိုသာမှန်ကုန်ကြလေ၏
လေယာဉ်လေးလျှင်မြန်စွာရေပေါ်တွင်ပြေးပြီး အမြင့်ပေတော်တော်များများသို့အရောက်တွင်သူ့လေယာဉ် ကိုအပြစ်ခံရ၍မကြေမနပ်ဖြစ်နေသော ကိုထွန်းအေးတစ်ယောက် ဂိဂိ ပြန်လှည့်ကွာ ဟိုလက်နက်ထုတ်သုံးမယ်
‘ဗုတ်ပြဲကြီး အကွက်လား ကိုထွန်းအေး’
လေယာဉ် ၁၈၀ဒီဂ၇ီ ကွေ့လာပြီးကျွန်းရှိရာဖက်သို့ပြန်လည် ပြန်သန်းလာ ယခင်ကလူနောက်ကြီးများလေယာဉ် ဆိုက်ကပ်ခဲ့ရာနေရာမှ လူနောက်ကြိးများလေယာဉ်ကိုသေနတ်နဲ့လှမ်းပြန်နေကြသော စစ်သားအုပ်စု အား ကိုထွန်းအေးမှလေယာဉ်ထိပ်ပိုင်းသို့တွယ်တက်သွားကာ ကားယားခွလျှက် မောင်းခလုပ်ကိုဆွဲချလိုက်လေတော့သည် ဖျောင်းခနဲမြည်သံနဲ့အတူ လေယာဉ်ဝမ်းဗိုက်ပွင့်သွားပြီး လူနောက်ကြီးများနဲ့နာမည်ကျော် ခွေလှေးယားသီး ကိုအီးနဲ့ ပယ်ပယ်နယ်နယ် နယ်ထားသော အရားများ တဘတ်ဘတ် ထွက်ကြကာ စစ်သားများထံသို့ ပေကြံကုန်လေတော့သည်….စစ်သားများလည်း ယားယံ နံဟောင်လှသော အရာများကိုမခံနိုင်၍နှလုံးသွေးပျက်၍သော်လည်းကောင်း ရေထဲခုန်ချပြီးမှရေမကူးတတ်၍သော်တစ်ကြောင်း အတုံးတုံးအရှံးရှံးသေကုန်ကျလေတော့၏………….လူနောက်ကြီးများလေယာဉ်ကတော့ မျက်စိတစ်ဆုံးမှန်ပြပြသာမြင်ရတော့၏
« Reply #15 on: November 07, 2011, 05:56:03 AM »
ဟီးဟီး ကောင်းတယ် ကိုဇော်ရဲ.....မင်းသားကြီး စတားလုံး သိသွားရင် ငိုသွားတော့မယ်။
ဆက်ရေးဗျာ.....စောင့်နေတယ်။ အဲ.....ကျနော့် သရော်စာလဲ ဆက်ရဦးမယ်.....
« Reply #16 on: December 16, 2011, 08:53:43 PM »
ရဲရဲ ဇတ်လမ်းဆက်ရေးအူးယေ နာ စောင့်နေဒယ် ဖတ်လို့ကောင်းခန်းရောက်နေတာကို
« Reply #17 on: February 16, 2012, 08:15:17 AM »
မရေးဖြစ်တာကြာပီဖြစ်သော သရော်စာဇာတ်လမ်းပြန်ရေးပါတယ် ။ အားပေးသူများအား ကျေးဇူးအထူးထင်ရှိပါကြောင်း
နေရာ: : လူနောက်ကြီးများ ထိုင်ပီးအတင်းတုပ်နေကြ နာမည်ကျော်နတ်သား၏ တက်တူးနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်
အချိန်: : 19:18
နာမည်ကျော်နတ်သား၏ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အတွင်းတွင် သူ၏ trademark ဖြစ်သော soho rainbow bb ကလာသောရုပ်ရှင်များ ပြသလျှက်ရှိရာ အချစ်တက္ကသိုလ်အတွင်းမှ ဖေဇော်ဂျီ နဲ့ ဖိုးသက် တို့ မျက်တောင်မခတ်တမ်း အားရပါးရအားပေးလျှက်ရှိလေသည်။ ထိုအချိန်တွင်ဝူးဝူး ဝေါဝေါဟူ သော စက်သံများနဲ့အတူ လူနောက်ကြီးတို့ တစ်သိုက်အသီးသီး ဆိုင်အတွင်းဝင်ရောက်လာလေပေ၏။
ထိုအချိန်တွင်မှ ဦးနတ်သားလည်း အပြေးတစ်ပိုင်း TV ကိုပိတ်ပီးသကာလ မိန့်မိန့်ကြီးဆေးပြင်းလိပ်သောက်ကာ လူနောက်ကြီးများအား “ဟေး မင်းတို့တွေ ဗီလီနာကို သွားတာအဆင်ပြေကြလား ငါ့လူတို့” ဟု နှုတ်ဆက်စကားအရှက်ပြေ ပြောကြားလိုက်လေတော့သည်။
ကိုထွန်းအေးမှပင် “မပြေပါဘူး နတ်သားရာ ဗီလီနာစစ်တပ်က လိုက်ပစ်လို့ မနည်းထွက်ပြေးလာရတယ် သို့ပေသိတော်သေးတာက ဗုတ်ပြဲကြီး ထုတ်သုံးလိုက်မှ ဒီကောင်တွေအတုံးအရှုံးသေကုန်တယ်ဗျ ဒါပေမယ့် ကျန်တော် ဗီနီလာကိုတော့ နောက်တစ်ခေါက် မဖြစ်မနေ သွားကိုသွားရမယ်ဗျ ဒီကိစ္စအတွက်အသက်ပင်သေသေအရေပင်ခန်းခန်း ကျန်တော်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြစ်ပီးသွားပီ’
ဂိဂိ စိတ်ထဲတွင်မူ “ဒီလူကြီး မသိရင်ခက်မယ် ဟွန်း ဟိုက မမစနေ၂ခိုင်ကိုမြင်ပြီး ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်နေတာများ မသိတာကြလို့”
ကိုစီကာမှလည်းတဖန် “ဟုတ်တယ် ဒီမစ်ရှင်ကခက်လည်းခက်မယ် ဒါပေမယ့်ပိုက်ဆံကလည်းတော်တော်များများကိုရမယ်ဒီတော့ စွန့်စားတော့တော်တော်လေးစွန့်စားရမယ်”
သိုင်းပညာရှင်ဂိဂိမှလည်း “ဟုတ်တယ်ကျန်တော်ပိုက်ဆံတော်တော်လိုနေတယ်အခုတစ်လော ကျန်တော်ကျူဖို့ရယ် သောက်ဖို့ရယ် ဒိုတာခုတ်ဖို့အတွက် ပိုက်ဆံကတော်တော်လိုနေတာဗျာ ဒီတော့ ကျန်တော်ကတော့မဖြစ်မနေသွားရမယ်”
ကိုသရဲမှာလည်းအားကျမခံ “သရဲနော် ဒဲ့ပဲပြောမယ် စားလည်းဒဲပဲ သွားလည်းဒဲ့ပဲ အိပ်လည်းဒဲ့ပဲ သောက်လည်းဒဲ့ပဲ ထည့်လည်းဒဲ့ပဲ ဒီတော့ ဒဲ့ ပြောရရင် အဲ့ကျွန်းကို သရဲဒဲ့ သွားမယ်လို့ ဒဲ့ပြောတယ်နော်”
နောက်ဆုံးတွင်ကိုဒီတိုမှ “မင်းတို့သွားမယ်ဆိုလည်း လက်နက်ကြီးနဲ့ဗျူဟာကတော့ စိတ်မပူပါနဲ့ကွာ ငါတစ်ယောက်လုံးရှိပါတယ် ငါလိုက်မှာပါ”
ထိုအချိန်တွင်ဝုန်းကနဲ့တစ်ခါးဖွင့်သံနဲ့အတူ ငါ့ကိုကော မေ့ထားကြပီးလားဟင် ဟုသောအသံနှင့်အတူ ဂျေးဂျေးတစ်ယောက် ၀င်လာလို့လာပေတော့သည်။
ကိုစီကာမှသက်ပြင်းချ၍ “ဒီမယ် ဂျေးဂျေး ဒီတစ်ခါက်မစ်ရှင်ကမင်းလိုက်လို့မဖြစ်တော့ဘူးကွ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မင်းကမူးလာရင် အရမ်းရစ်တယ် ပေါက်ကရလုပ်ချင်ရာလုပ်တယ် ပြောစကားနားမထောင်ဘူး ကောင်မလေးတွေကိုအရမ်းကျူတယ် နောက်ပြီးမင်းဗလကြီးကအရမ်းကြီးနေတယ် အဲ့ဒါကြောင့် မင်းစိတ်တွေညိမ်သွားတဲ့အခါကြမှ မင်းလိုက်ကွာ ဟုတ်ပီလား”
“ဗျာ ကျဥကျဥ ခင်ညားကြီးဂျာ အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဗျာ ကျဥကျဥ အနော်ကျူတယ်ဆိုတာ မကျူရင် ဘယ်သူကျူမှာလည်းဗျာ မူးလာရင်ရစ်တယ်ဆိုတာ အနော်က ၁ပတ်မှာ ၇ရက်ထဲသောက်တာပါဗျာ ခင်ညားကြီးအဲ့လိုပြောတာ ကျန်တော်အရမ်းဝမ်းနည်းသွားပီဗျာ မှတ်ထားဗျာ ခင်ညားတို့တစ်နေ့နောင်တရမယ် ကြပ်ကြပ်(ကိုကြီးကြပ်မဟုတ်ပါ) သတိထားဗျာ ဒါဗဲ” ဟုဂျေးဂျေးမှ ၀မ်းနည်းမှောက်ခုံဖြစ်ကာ လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ်နဲ့ထွက်ခွာသွားလေတော့၏။……..
ကိုထွန်းအေးမှလည်း ပီးတာတွေလည်းပီးပါပီကွာ ကဲ ငါတို့အဲ့ဒီကျွန်းအတွက်မစ်ရှင်ဘ၇စ်ဖင် လေးလုပ်လိုက်ကြရအောင် အဲ့ဒီကျွန်းမှာ ခေါင်းဆောင်ကတော့ general လူဂျီးဆိုတာပဲကွာ ဒီလူတော်တော်ဆိုးတယ် သူရာထူးတက်ချင်တော့ လုပ်ချင်တာတွေအကုန်လုပ်တော့တာကွာ စည်းကမ်းလည်း နားမလည် ဖတ်လည်းမဖတ် သူများဟာတွေလည်း သူ့ဟာလိုလိုလုပ်ပီး နေတာကွာ သူ့ကတော့ စစ်တပ်တစ်ခုလုံးကို အုပ်ချုပ်တာပေါ့ကွာ။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ အဲ့ကျွန်းမှာမွေးတာတော့မဟုတ်ဘူး သူက အမေရိကန်ကကွ ဟိုကာဒီကာ တဲ့နာမည်က သူ့ကအတော်လေးရိုင်းတာကွ အထက်လူကြီးတွေ သတိပေးတာတောင် ရိသလိုလိုသဲ့သလိုလိုလုပ်တော့ သူ့ကို ထုတ်တော့မထုတ်ဘူး သို့ပေသိ ကန့်သတ်လိုက်တာကွာ ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးပေါ့ ဒါကြောင့် ဗီလီနာကျွန်း ဗိုလ်ချုပ် လူဂျီးနဲ့ပေါင်းပီး အနုတ်စစ်ဆင်ရေး လုပ်နေကြတာ။ အဲ့ဒီဟိုကာဒီကာမှာ သက်တော်စောင့်က တော်တော်ဗလတောင့်တောင့်နဲ့တိုက်ရည်ခိုက်ရည်အတော်ကောင်းပီး ခါးပတ်နက် ၈ထပ်ကွမ်းရထားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း ရန်ကုန်ဒုတ် ..... ကွတော်တော်လေးသတိထားရမယ်၊ …….
နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုက ငါတို့က ပထမတစ်ခါတုံးက immigration ကိုဖြတ်လိုက်တော့ ငါတို့ပုံတွေသူတို့အကုန်သိကုန်ပီ ဒီတော့ ငါတို့အဲ့ကျွန်းကိုပြန်ဝင်ဖို့ရာခက်မယ်ဒီတော့ ငါ့တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဆိုတာ ကိုစဉ်းစားကြဦး……………..
အားလုံးပဲတွေဝေငေးမောကာ အတန်ကြာစဉ်းစားပီးသကာလ……..ဂျေးဂျေးမှာ “ကျန်တော်အကြံရပီ ဗျာ ဒီလိုလုပ်မယ် ဒီလိုကိစ္စတွေဆို အင်မတန်မှဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကောင်းလှတဲ့ ကျန်တော်အစ်ကိုကြီး ဇာတ်ဆရာစိန်ဂေါ်လီပန့်တရာ မီးသွေးနဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်မယ်ဗျာ ဒီလူက အင်မတန်မှ အမြော်အမြင်ကြီးတာဗျာ အကြံကောင်းတွေလည်းထွက်မှထွက်”………..
ကိုစီကာနဲ့ကိုဒီတိုက လည်း “ဟုတ်ပါ့ဂျေးဂျေး ရာ မင်းတော်တယ် ဒီလိုဦးနှောက်လေး ၀ီစကီစိမ်ထားသင့်တယ်”
သွားကြမယ်ဟေ့ ဇာတ်ဆရာစိန်ဂေါ်လီပန့်တရာကိုမီးသွေးစီကို………………………….၀ူးဝူးဝေါဝေါ ဗျင်းဗျင်းဗူးဗူး………..
« Last Edit: February 16, 2012, 11:32:19 AM by zawye »
Re: တက္ကသိုလ်မှ သရော်စာဇတ်လမ်းများ
« Reply #18 on: February 16, 2012, 08:24:05 AM »
ရဲရဲ .. နီ ရေးတဲ့ အထဲမှာ နဂျေကို ”မင်းကမူးလာရင် အရမ်းရစ်တယ် ပေါက်ကရလုပ်ချင်ရာလုပ်တယ် ပြောစကားနားမထောင်ဘူး ကောင်မလေးတွေကိုအရမ်းကျူတယ်” ရေးထားတာတော့ ကွက်တိပဲ .. ခွိ ... ဆက်ရေးဟယ် .. အားပေးနေတယ် ဟ .. အဆင်ပြေရင် နောက်လူတွေထဲက လူစွမ်းကောင်းတွေလဲ ထည့်ရေးဦး
ပြောစရာ တစ်ခုပဲ ရှိတယ် .. င့ါ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ... နီ လုပ်တာနဲ့ ဟိုဆိုင်ဖြစ်တော့မယ် .. ခွိ .. တော်ကြာနေ ရ၀တ က လာဖမ်းသွားဦးမယ်
တခါတလေတော့လဲ လွမ်းမိပါတယ် .. ပြီးဆုံးခဲ့ အဖြစ်အပျက်တို့ အသစ်ဖြစ်ဖို့ မလွယ်ကူတာ မှန်ပေမယ့် ...
« Reply #19 on: February 17, 2012, 10:52:38 AM »
နေရာ ဇာတ်ဆရာ စိန်ဂေါ်လီ ပန့်တစ်ရာမီးတွေး၏ နေအိမ်
နေအိမ်အတွင်း၌မူကား အပ်ကျသံကြားရလောက်အောင်ပင် တိတ်ဆိတ်လျှက် နေပေ၏……ထိုတိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြိုခွင်းလိုက်သူကားအခြားမဟုတ် နာမည်ကျော်အချစ်တက္ကသိုလ်တွင် တွဲဖက်ပါမောက္ခအဖြစ်လည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပီး သူ့ဝါသနာပါသော ဇာတ်ဆရာအလုပ်ကိုလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်သူ ကိုမီးသွေးပင်တည်း………..
အိမ်း မင်းတို့က ငါ့ကိုယုံယုံကြည်ကြည့်နဲ့ ဒီလိုလာတိုင်ပင်တယ်ဆိုတော့ လည်းငါဝမ်းသာပါတယ်ကွာ ဒီကိစ္စက တော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်ကွ ဒီတော့ တစ်ချက်မှားသွားရင် အသက်ပျောက်နိုင်တယ် ဒီတော့ သေသေချာချာစဉ်းစားရမယ်………ထွက်စမ်းထွက်စမ်းအကြံတွေအကြံတွေ……..ဟေးဟေး ဟုတ်ပီကွ ငါအကြံရပီ..
လုပ်ပါဦး ကိုမီးသွေးရယ် ကိုထွန်းတို့အားကိုးပါတယ်..
ဒီလိုလုပ်ဗျာ ခင်ဗျားတို့ အဲ့ဒီဗီလီနာကျွန်းကိုပြန်သွားမယ်မဟုတ်လား မင်းတို့ကိုမှတ်မိနေတယ်ဆိုတော့ ပထဦးဆုံး ရုပ်ဖျက်ရမယ်ကွ နောက်ပြီးဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့သွားမှာလည်းဆိုတာက အရေးကြီးသွားပီ….ဒီတော့ရုပ်လည်းဖျက်မယ် ဘာကြောင့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ ငါတို့အငြိမ့်သွားကမယ်ကွာ ပရိုမိုးရှင်းဆင်းတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ကွာ ငါဦးဆောင်မယ်ကွာ အဲ့ဒီအငြိမ့်ကို မင်းတို့က လူရွင်တော်တွေလူပျက်တွေလုပ်ရမယ်ဟုတ်ပီလား……
အင်းကိုမီးသွေးအကြံက ကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် အငြိမ့်ကဖို့ မင်းသမီးကကော ဘယ်သူလည်း ချောမှဖြစ်မှာနော် မချောရင်တော့မကြိုက်ဘူးဗျ… ဟု ကိုစီကာမှလည်းဝင်ရောက်ပြောဆိုလေ၏
အိမ်းငါ့မှလည်း မင်းသမီးဆိုတာ မချောရင်ဘယ်ရွေးမလည်း စီကာရ ချောမှရွေးမှာပေါ့ မင်းသမီးကတော့ အခုတစ်လောချက်ခန်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မည်းတူးကြီး ကိုပဲရွေးမယ်လေကွာ သူကသီချင်းဆိုတာပိုင်တယ်ဟေ့.အသံကတော့ ကောင်းတယ်ကွနောက်ပီးမင်းသမီးမည်းတူးကြီးက အသားးကလည်းမည်းတော့ ငါတို့မင်ရှင်ကြရင် ကိုယ်ယောင်ဖျောက်တဲ့အခါလွယ်တာပေါ့ကွာ အင်္ကျီတံုံးလုံးနဲ့သူထွက်ပြေးလိုက်ရင် ညဖက်ဆိုသူ့ကိုဘယ်သူမှတောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးကွ…….
ကောင်းလိုက်တဲ့အကြံဗျာ …….ဒါကြောင့်လည်း ကိုမီးသွေးကိုမီးသွေးနဲ့ နာမည်ကျော်နေတာကိုး……..ဟုကိုထွန်းအေးမှလည်းဝင်ရောက်ထောက်ခံလိုက်လေ၏
ကိုမီးသွေးကပင်ဆက်လက်၍ ဇာတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ လူကလည်းများသမို့ငါတော့ သူဌေးကြီးဖင်ဖြူ အိုင်မေးကို အကူအညီတောင်းလိုက်မယ်ကွာ သူ့ဆီမှာ သဘောင်္တွေရှိတယ်ကွ ဒီတော့ ငါတို့သဘောင်္နဲ့ ဗီလီနာကိုသွားကြမယ်…………ဗိုလ်ချုပ်လူဂျီး ကိုဖမ်းဖို့ ကတော့ ငါ့တို့အသေးစိတ်ထပ်တိုင်ပင်မယ်ကွာ…..
လူနောက်ကြီးများအုပ်စု ဗီလီနာကျွန်း မြေပုံကိုထုတ်ကာ ခေါင်းချင်းဆိုင်လျှက် တီးတိုးတိုင်ပင်ကာ အစီအစဉ်များရေးဆွဲ နေပေတော့လေသည်…..
အချိန်၉:၀၀ နေရာ ဗလီနာ ကျွန်းရှိ ဆိမ်ကမ်း
ဗလီနာ ကျွန်းရှီ သာယာလှပလှသော ဆိပ်ကမ်းတွင် ဇာတ်ဆရာစိန်ဂေါ်လီပန့်တရာ မီးသွေး ဦးစီးသော လူနောက်ကြီးမှ ဇာတ်အဖွဲစီးနင်းလိုက်ပါလာသော သဘောင်္ကြီး ခန့်ညားစွာဆိုက်ကပ်လို့လာပါတော့သည်။
ဗလီနာကျွန်းသားများလည်း ဇာတ်ဆိုတာကိုမမြင်ဘူးသောကြောင့် လာကြည့်ကြသူများလည်းကမ်းလုံးကျွတ်မှရှိနေပေသည်။
အဖွဲသားများလည်း သင်္ဘောပေါ်ကနေဆင်းပီး ဗီလီနာကျွန်း၏ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားလှသော immigration သို့ဝင်ရောက် လေကြတော့လေ၏...immigration officer အက်ဆက်ဆင်နိတ်တာ ရစ်ချင်သော်လည်း… ဤဇာတ်အဖွဲ့ကိုငှားရမ်းသူ ဗီလီနားကျွန်းရဲ့မြို့မျက်နှာဖုံး သူဌေးကြီး ၏ထောက်ခံစာကြောင့် အခက်အခဲအစစ်အဆေးအမေးအမြန်းမရှိထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ကြလေသည်။
အထွက်တွင်မူ သူဌေးကြီး စေလွတ်ထားသော ကားများက စောင့်ဆိုင်းလျှက်ရှိပေသည်…..
နာမည်ကျော်ဗီလီနာ ကျွန်းသူဌေးကြီး အိမ်ဝင်းထဲသို့ ကားများ အစီစီအရီအရီ ဆိုက်ဝင်လာကြပေသည်…..
ဇာတ်ဆရာကိုမီးသွေးလည်း အိမ်ရှေ့ရေကူးကန်း ဘေးတွင် မာတီနီသောက်ကာ ရေကူးနေသော တစ်တီတစ်တီလေးများအား မျက်စိပဒါသကြွေးနေပေလေသည်။ ထိုစဉ် သူဌေးကြီး၏ အားထားရသောလူယုံတော် မိုန က သူဌေးကြီးဇာတ်အဖွဲတွေ ရောက်ပါပီ
ကိုမီးသွေးလည်း သဌေးကြီးရှီရာ သို့လှမ်းလာခဲ့ကာ
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါဟု အလွန်လေယူယာသိမ်းကောင်းလှသော အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်နုတ်ဆက်လိုက်လေ၏
သူဌေးကြိးဆိုသူမှာ လားလားဟုတ်ရိုးလား…….နာမည်ကြီးလှသော အချစ်တက္ကသိုလ်တွင် ပါမောက္ခ တာဝန်ယူထားပြီး အိမ်မှပင် စီစဉ်ညွန်ကြားနေသူ ငယ်နာမည်က မောင်တုတ် အသက်ကြီးလာသောအခါ လေးစားသမှုဖြင့် ဘကြီးတုတ် ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြ သော နာမည်ကြီး ရှောင်လင်ကျောင်းထွက် ဘကြီးတုတ်ပင်ဖြစ်လေတော့သည်.။
လူနောက်ကြီးများနှင့် ကိုမီးသွေးတို့အုပ်စုလည်း ဘကြီးတုတ်နှင့်အဖွဲကြကာ ရေကူးနေကြသော အိုးရှင်းလေး တို့ဟွန်နီဂဲလ် တို့ အား ၀ိုင်းဝန်းဂလုကြပေတော့သည်…..ဂလုဂလု……..
« Last Edit: February 17, 2012, 01:00:16 PM by zawye »